Shiinaha MJ-1430 Log warshad mashiinka badan arkay iyo saarayaasha | Ruima
TAHA arkay daab for looxa
Baadhitaanka MTL ee loogu talagalay Wood SKS-51 Qalabka Alwaaxda Birta ah ...
MTL arkay daab goynta Calcium Silicate Board High Sp ...
Mashiinka loo yaqaan 'MTL Saw' oo loogu talagalay jarista aluminium ee alwaaxa
DIMAR daab daab for alwaax
MJ-4003 Mashiinka miiqashada miiqda makiinadaha badan
MJ-2030 Round log Miiska Quudinta
MJ-1430 Log mashiinka miinshaar badan
MJ-3016 Plank mashiin badan oo miinshaar ah
DJ-230J Mashiinka Wadajirka Xagalka Mashiinka Mashiinka
QJ-200 Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xagasha Sawirka
Mashiinka goynta alwaaxda saxda ah si uu kaaga caawiyo inaad ku dhameysato shaqada. Nidaamka quudinta qaabdhismeedka silsiladda laba jibaaran + ka bixitaanka marinka, quudinta xoogan iyo xasiloon, wuxuu arkay alwaax si habsami leh.
Mashiinkaan miisaanka badan ee lagu arko ayaa loogu talagalay mashiinnada culus. Waxaa loo isticmaalaa in lagu jaro alwaax kala duwan oo adag, sida fir China, metasequoia, pine, geedka geedka 'Mongolian scotch', qoryaha loo yaqaan 'chestnut wood, poplar, beech, acacia.
Mashiinka ayaa dib loo dhigay si loo buufiyo biyaha, qadar yar oo biyo ah si loo gaaro saameynta qaboojiyaha daabka ugu fiican; Waqtiga sida gaarka ah loo qorsheeyay, isugeynta tirada ee biyaha, maahan oo kaliya in la qaboojiyo daabka lagana dhigo balka aad u qoyan.
Meesha quudinta waxaa lagu qalabeeyaa qalab xaddidan oo dherer ah. Markay dhaafto xadka loo ogol yahay, quudinta ayaa kaligeed istaagi doonta.
Deganaansho sare iyo nabadgelyo wanaagsan
Cabbiraadda infrared, saxnaanta sare ee qalabka goynta
Qaadista qaab-dhismeedka qaboojinta biyaha: Waxay ku ilaalin doontaa baalasha miraha leh heerkul hooseeya iyo adeeg dheer.
Qaab dhismeedka silsiladda quudinta oo awood leh: Hayso gaadiidka si habsami leh hawlgalkuna waa karti sare.
Badhanka si fudud loo xakameeyo
Ku qalabeysan aaladda elektaroonigga ah ee qalabka ilaalinta hadda jirta, si toos ah u quudinta quudinta markay baabuurtu dhaafto;
Mashiinka laba-geesoodka ahi wuxuu siiyaa awood ku filan si uu goynta si habsami leh u sameeyo!
Mashiinka asalka ah wuxuu ku qalabeysan yahay 8 * 2 miishaar oo lagu sawiray oo lagu waafajiyay hareeraha miisaska hareeraha.
Gal mashiinka miinshaar badan
Min. Dhererka shaqada
Dhexroor dunmiiqa Main
0-10m / daqiiqo
Dunmiiqa weyn (kor)
Dunmiiqa weyn (hoos)
Saw daab Spe.
Qalab miinshaar ah oo la qalabeeyay
Hore: MJ-3016 Plank mashiin badan oo miinshaar ah
Xiga: MJ-2030 Round log Miiska Quudinta
14 Mashiinka Jarida inji
Dake Saw qabow
Mashiinka Gidaarka Lagu Arkay